Barcelona oo ka hadashay kulanka ugu adag wareega siddeeda ee Champions League ay kul ciyaari doonaan Man United – Gool FM
Barcelona oo ka hadashay kulanka ugu adag wareega siddeeda ee Champions League ay kul ciyaari doonaan Man United
(Europe) 15 Maarso 2019. Isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League oo maanta la sameeyay ayaa waxaa kasoo baxay kulamo aad u xiiso badan, sida kulanka dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Manchester United.
Kulankan dhex mari doono Barcelona iyo Manchester United ayaa ah kan ugu adag wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League, halka sidoo kale ay kooxaha kale isugu beeg meen Juventus vs Ajax, Liverpool vs Porto, Manchester City vs Tottenham.
Hadaba agaasimaha xiriirka hay’adaha ee kooxda reer Catalonia ee Guillermo Amor ayaa wuxuu ka hadlay kulanka ku dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Manchester United wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.
“Waan ku faraxsanahay, waa inaan ciyaarnaa kulankan inagoo ku jirna xaalad aad u wanaagsan”.
“Manchester United waa koox fiican, waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn uguna muhimsan Yurub”.
“Waxaan u aadi doonaa Manchester United si aan natiijo wanaagsan u helno, waxaan qabaa inaanan weli ku guuleysan halkaas, sidaasi darteed waxaan rajeynayaa inaan natiijo fiican ku soo helno, kahor kulanka lugta labaan”.
Sidee loo kala hogaaminayaa Gool dhalinta Champions League iyo Europe League??
Pavel Nedved oo ka digay halista kaga imaan karta kooxda Ajax wareega siddeeda ee Champions League